Baqdin dhanka amniga oo ku soo korortay Dhuusamareeb, xilli siyaasiyiin taggeen | Dhacdo
Home Wararka Maanta Baqdin dhanka amniga oo ku soo korortay Dhuusamareeb, xilli siyaasiyiin taggeen
Baqdin dhanka amniga oo ku soo korortay Dhuusamareeb, xilli siyaasiyiin taggeen
Iyadoo Magaalada Dhuusamareeb lagu qabanayo Doorashada Labada Aqal ee Baarlamaanka Somaliya qaybtood ayaa waxaa magaaladaasi gaaraya siyaasiyiinta deegaanka ka soo jeedda, ee daneynaysa ka mid noqoshada Baarlamaanka 11aad ee dalka.
Magaalada ayaa marti-gelinaysa maleeshiyaad aad u hubeysan, oo ay kala wataan siyaasiyiinta, taasoo keentay in walaac dhanka amniga ahi laga muujiyo.
Sidoo kale magaalada ayaa waxaa ka soconayo kulamo la xiriira Doorashada Labada Gole ee Baarlamaanka. Kulamadan ayaa waxaa qayb ka ah kulamo uu Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ka wado magaaladaasi.
Siyaasiyiinta ku sugan magaaladaaasi, ee ay siyaasadda ku kala aragtida duwan yihiin Madaxweynaha ayaa isha ku haya liiska musharaxiinta Aqalka Sare, ee dhawaan la fillayo inuu Madaxweynuhu soo gudbiyo.
Wariye-yaasha ayaa soo sheegaya soo bandhigidda Xubnaha Galmudug ku metelaya Aqalka Sare inay tahay imtixaan siyaasadeed horyaala Madaxweyne Qoorqoor.
Madaxweyne Qoorqoor ayaan ku deg-deggi doonin gudbinta liiska musharaxiinta ee ku tartamaysa sideedda kursi ee Galmudug ku leedahay Aqalka Sare, isla-markaana uu arrintaasi wadatashi badan ka samayn doono.
Guddiga Amniga Doorashada Labada Aqal ee Galmudug ayaa soo saaray awaamiir lagu adkeynayo amniga labada goobood ee lagu qabanayo Doorashada Xildhibaanada ee Dhuusamareeb iyo Koonfurta Gaalkacyo.
Taliyaha Booliska Galmudug, G/sare Khaliif Cabdulle Maalin ayaa sheegay in guddigu uu mamnuucay dhammaan hubka iyo gaadiidka dagaal ee lagu dhex haysto magaalooyinka deegaanka doorashada ee Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo.
“Ma jiri karto wax hub ah oo magaalooyinka aan kor ku soo sheegnay lagu dhex wadan karo, oo aan ka ahayn hub fasax looga haysto laamaha amniga.” Ayuu yiri Taliyaha oo intaa ku daray “Ma jiri karo askari ama ciidan oo magaalooyinka dhex lugeyn kara, oo aan ka ahayn ciidanka loo xilsaaray suggida amniga guud, gaar ahaan magaalooyinka.”
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Waxaa la mamnuucay gebi ahaanba in garoomada diyaaradaha Galmudug si guud, gaar ahaan magaalooyinka ay doorashadu ka dhaceyso, sida Caasimadda Galmudug iyo Gaalkacyo laga soo dejiyo ama la soo geliyo hub iyo gaadiid dagaal, oo aan fasax loo haysan.”
Khaliif Cabdulle ayaa xusay in laamaha ammaanka ay tallaabo ka qaadi doonaan, cid kasta oo ku xadgudubta buu yiri awaamiirta aan bixinay.
“Hay’adaha amnigu waxay tallaabo ku haboon ka qaadi doonaan cid kasta oo ku xadgudubta awaamiirta aan bixinay.” Ayuu yiri Khaliif Cabdulle.
Si kastaba ha-ahaatee Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug, Maxamed Nuur Gacal ayaa siyaasiyiinta ugu laab qaboojiyay inaanay jirin cid awood u leh inay duudsiiso xaqa ay u leeyihiin in la doorto amaba ay wax doortaan.
Previous articleTirada dadka COVID-19 ugu dhimanaya dalka oo sii kordhaysa
Next articleXubno uu ka mid yahay Cali Dheere oo lagu daray liiska argagixisada